Wararka Xanta Suuqa kala iisbiga iyo Wargeysyada Yurub ee Saaka: Lingard, Pogba, Upamecano, Rice, Ozil, Alderweireld
HomeSuuqa kala iibsigaWararka Xanta Suuqa kala iisbiga iyo Wargeysyada Yurub ee Saaka: Lingard, Pogba, Upamecano, Rice, Ozil, Alderweireld
Inter Milan ayaa dooneysa inay amaah ku qaadato ciyaaryahanka khadka dhexe ee Manchester United iyo England Jesse Lingard, 28, laakiin waa hadii ay culeys saari karaan ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Denmark Christian Eriksen, oo 28 jir ah. (Mirror)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee United Paul Pogba waxaa doonaya tababaraha cusub ee Paris St-Germain Mauricio Pochettino kaasoo doonaya inuu kooxdiisa ka dhiso 27 jirkaan. (Dailystar)
Chelsea ayaa diyaar u ah inay ku biirto baacsiga loogu jiro daafaca reer France ee RB Leipzig Dayot Upamecano, oo 22 jir ah (Dailymail)
Kooxda Bundesliga ka dhisan ayaa sheegtay inay sii wadi doonto iibinta ciyaartoydeeda ugu fiican iyo Manchester United oo dooneysa inay lasoo saxiixato daafac dhexe, welina ay isha ku hayaan Upamecano. (Manchester Evening News)
Xiddiga qadka dhexe ee Mesut Ozil ayaa u soo bandhigi doona Arsenal fursad ay kaga saari karaan kooxdiisa bishaan isagoo helidoona inta ka hartay qandaraaskiisa £ 350,000-toddobaadkii saddexda sano ee soo socota, iyadoo 32 jirka reer Jarmal uu rajeynayo inuu u dhaqaaqo. kooxda Turkiga ka dhisan ee Fenerbahce . (ThSun)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee West Ham United England Declan Rice, 21, ayaa doorbidaya inuu sii joogo London mana xiiseynayo inuu ku biiro Manchester United , isagoo ka tagaya Chelsea halka ay u badan tahay inuu tago. (Mirror)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Arsenal Lucas Torreira ayaa laga yaabaa inuu ku sii jeedo Fiorentina, iyadoo 24 jirkaan reer Uruguay ee amaahda ku jooga Atletico Madrid uusan u shaqeyn sidii loogu talagalay . (Mundo Deportivo – Isbaanish)
Kooxda ka ciyaarta Ligue 1 ee Nice ayaa u furan inay si joogta ah ula soo saxiixato xiddiga Gunners William Saliba xagaaga ka dib markii ay rajo fiican ku bilaabeen amaahdii 19 jirkaan reer France. (Thesun)
Everton ayaa ka wada hadlaysa heshiis isdhaafsi ah oo ay la sameyneyso kooxda Bournemouth taasoo u aragta in weeraryahanka reer Norway Joshua King, oo 28 jir ah uu aadayo Goodison Park Cherries ayaa xiiseyneysa midkood Toffees-qadka dhexe Jarrad Branthwaite, 18jir ah, ama daafaca midig Jonjoe Kenny, 23 jir ah, oo dhanka kale u dhaqaaqaya. (Thesun)
Manchester United ayaa go’aansatay inay la soo wareegto 19 jirka qadka dhexe ee reer Ecuador Moises Caicedo, laakiin ciyaaryahanka Independiente del Valle ayaa weli bartilmaameed u ah Brighton . (Sky Sports)
Xiddiga reer France oo horay ula soo ciyaaray kooxda Celtic ayaa la rumeysan yahay inuu ku dhow yahay inuu ku biiro Atletico Madrid. (Marca)
Ciyaaryahanka reer Brazil ee khadka dhexe uga ciyaara kooxda Manchester City Fernandinho, oo qandaraaskiisa Etihad uu dhacayo dhamaadka xilli ciyaareedkan, ayaa dalabyo ka helaya dalkiisa hooyo ee Brazil iyo guud ahaan Yurub sida uu sheegayo wakiilka 35 jirkaan. (Goal)
City ayaa Republic of Ireland Under-19s daafaca Timi Sobowale, oo 18 jir ah ayaa waxaa doonaya kooxda Major League Soccer Real Salt Lake City . (Dailymail)
Roy Keane ayaa doonaya inuu ku soo laabto maamulka. Ciyaaryahankii hore ee khadka dhexe ee Manchester United iyo Republic of Ireland ayaa diirada saarayay khubarada tan iyo markii uu ka tagay doorkiisa caawiye ka ahaa Nottingham Forest sanadkii 2019. (Thesun)